Kungani abase-Nigeria benza kahle kangaka? | Scrolla Izindaba
Kungani abase-Nigeria benza kahle kangaka?
UAdewale (Wally) odabuka e-Nigeria uqokwe njengoSekela Nobhala Wezezimali eMelika ekuphathweni kukaJoe Biden – isikhundla esinamandla emnothweni womhlaba.
Lokhu kuyimpumelelo engavamile kuAdeyemo, oneminyaka engama-39 kuphela futhi owafika ezinhlwini zokuphatha kukaBarack Obama. Uhole i-Obama Foundation kusukela kowezi-2019.
Kepha likhuluma ngempumelelo yama-Nigerian e-US nakwamanye amazwe asentshonalanga.
Ngaphandle kwemizamo kaMengameli uDonald Trump yokuvimba abokufika baseAfrika ukuthi baye e-US – kanye nokubhekisa kwakhe emazweni aseAfrika njengama-shitholes – abaseNigeria bangumphakathi wabokufika ophumelele kakhulu e-US.
Lokhu kushiye abanye abantu bezibuza ukuthi kungani isithombe sabokufika base-Nigeria eNingizimu Afrika sehluke kangaka.
Abanye abantu baseNingizimu Afrika babheka omakhelwane babo base-Nigeria njengabashushumbisi bezidakamizwa nezigebengu – idumela eligqanyiswe kwibhayisikobho i-District 9 lapho izigelekeqe ezesabekayo zase-Nigeria zidla inyama yabokufika futhi badayisa ngabaqwayizayo kwabokufika.
Ukuvezwa okungekuhle kwabezindaba kukhuthaze ukuhlaselwa kwabantu base-Nigeria ngesikhathi sokucwaswa kwabokufika, udaba oluphazamise ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili anamandla eAfrika.
AbaseNigeria e-US ngokuhlukile bathathwa njengabaphumelele kakhulu, baqongelela iziqu ze-post-graduate kwezobunjiniyela, ezokwelapha nakwezobuciko, futhi baba ngamabhange kanye nezibalo ezihamba phambili emphakathini wamabhizinisi. Bahlezi bephakathi kwabafundi abenza kahle emanyuvesi aphezulu ase-US.
Omunye wososayensi abahamba phambili ngemuva kokuqhamuka kokugoma kwe-Covid-19 ngumuntu oyi-Nigerian American, uDkt uOnyema Ogbuagu.
Okhethweni lwakamuva lwase-US lweNigerian-American uOye Owelewa wakhethwa ukuba abe kukhongolose yesifunda sase-Columbia kanti uEsther Agbaje waba ngowokuqala oyi-Nigerian American ukunqoba isihlalo sesishayamthetho saseMinnesota.
Mhlawumbe umfundi kwenye indawo angenza ucwaningo ukuze achaze umehluko phakathi kokuthi imiphakathi evela ezweni elifanayo ingabukwa kanjani ngokuhlukile.
Cishe akunzima ukuqagela ukuthi kuzokwenziwa ngumuntu wase-Nigeria.